Intetho kumsitho wokwaziswa kwe-MAG (umbutho wokusetyenziswa kweelwimi ezininzi eMzantsi Afrika) ngomhla wama-21 ku-Agasti 2003 kwaLanga, eKapa.
Dept of African Languages
Ifoni:+27 21 8082106
Mphathitheko, zindwendwe ezibekekileyo, abaxhasi be-MAG, manene namanenekazi nabafundi kuluvuyo olukhulu ukubona inginginya engaka yabantu bewonge umsitho wesizwe. Siyi-MAG siziva sinelunda kakhulu xa sinibona sitsho sithi kuyabonakala ukuba namhla nguwayekela. Kwizinto zonke akukho igqitha intsingiselo yokuba lo msitho ube lapha kwaLangalibalele. Mawethu, eli theko ngesilibambe nakwenye indawo apha eKapa kodwa indawo yakwaLanga inentsingiselo eyodwa kumbono we-MAG ngenxa yabantu abaninzi abalapha abathetha iilwimi ezahlukeneyo ezininzi. Mzi wakwaLanga sisonke siziva sifudumele kukuba kule ndawo.
Phambi kokungena emxholweni wentetho endimele ukuyenza ndingaba andenzanga nto ukuba andinakwenza mazwi akhethekileyo kwiindwendwe zethu ezihloniphekileyo ezisuka kude. Ndinenyhweba yokwamkela kulo msitho abaxhasi be-MAG: unjingalwazi Cynthia Marivate osuka kwa-PANSALB eRhawutini nonkosikazi Elinor Sisulu ongumbhali otshatsheleyo. Kugqirha Nomso Mgijima osuka kwa-DAC ePitoli noyintloko yeCandelo leeNkonzo zeeLwimi sithi wamkelekile kulo msitho. Abafundi naye wonke umntu olapha siyi-MAG siyanamkela. Ndiyathemba niza kuba nexesha elimyoli nelinenzuzo kulo msitho.
He, ndize kwi-MAG! I-MAG: I-Meertaligheidsaksiegroep; I-Multilingualism action group; UMbutho wokuSetyenziswa kweeLwimi ngeeLwimi. Lo mbutho uqale ngendlela enomdla kakhulu kuba uqale ngokusuka iqela labantu balapha eNtshona Koloni likhokelwa ngunjingalwazi Charlene Dyers (engusihlalo) lidibane libonisane ngokuba ulwimi lunganegalelo elikhulu ekwakheni isizwe soMzantsi Afrika. Nangona lo mbono uziveze ngokunga kukuxhalabela ukugqunywa kwezinye iilwimi zezinye, eyona nyaniso ezingcanjini zalo mbono kukwakha isizwe, ulwimi lukhokele. Injongo ephambili neyona ingundoqo kwi-MAG kukuba iilwimi: ulwimi lokuthetha ngezandla, isiXhosa , isiNgesi, nesi-Afrikansi zisetyenziswe zisebenze ngokulinganayo kwaye oko kubonwe, kubonakale kusenzeka apha eNtshona Koloni. Nangona ndisingisa kwiNtshona Koloni, lo mbono ngumbono esaziyo ukuba unganwenwa usebenze kwilizwe lonke loMzantsi Afrika.
Oku kulingana kokusetyenziswa kweelwimi kungenzeka njani? Ukuba kuzo zonke iinkalo zobomi boluntu lwaseMzantsi Afrika bonke abantu bangazisebenzisa iilwimi zabo oku kulingana singakusungula. Loo nto ingadala ukuzingca komntu ngamnye ngolwimi lwakhe. Eyona nzuzo imandla kukuba omnye nomnye angatsho athakazelele ukufunda ulwimi lomnye. Oku kufunda iilwimi omnye efunda ulwimi lomnye kungakhokelela ekwazaneni nasekuqondaneni okongezelelekileyo. Omnye nomnye angamhlonipha ngakumbi omnye. Ngale ndlela kungatsho kube kho ukunxibelelana okongezelelekileyo kuba zona iilwimi ziyabambana ngabantu abaxhwithanayo njengoko esitsho uGagiano (2003:9) The languages hold hands; it is only people who punch one anothers noses or pull one anothers hair; who bully and butcher one another. (Literature as a mode of knowing: Reading and writing the world in English. Inaugural address by Prof Annie Gagiano July 2003). I-MAG iyakungqina oku kuba lo mbutho uyazi ukuba ngeelwimi singakha isizwe esiluqilima.
Izithwalandwe ezithathu: ugqirha Nelson Rholihlahla Mandela - umongameli woMzantsi Afrika odla umhlalaphantsi (noxolisileyo ngokungakwazi ukuba kho kulo msitho), nonjingalwazi Cynthia Marivate umlawuli we-Pan South African Language Board nonkosikazi Elinor Sisulu umbhali otshatsheleyo,bawonge lo mbutho ngokuba bamkele ukuba ngabaxhasi (patrons) bawo. Kubo sithi, ha-la-la-la-a! Mathandazwe! Asithandabuzi ukuba inkxaso yenu kulo mbutho iza kuza neziqhamo ezikhulu kwisizwe siphela.
I-MAG lolona manyano lukhulu lweeLwimi olwakha lwakho eMzantsi Afrika. Amalungu ethu aquka abathetha iilwimi ngeelwimi (eziseburhulumenteni nezingekho burhulumenteni) zaseMzantsi Afrika nemibutho eyahlukeneyo engama-20. Le mibutho yile ilandelayo:
Olu ludwe ngokucacileyo lubonakalisa inkxaso yombono we-MAG.
Indima esele siyihambile
I-MAG ibenegalelo ekuveliseni izimvo kusetyenziso lweelwimi kwipalamente yesizwe. i-MAG ikhuthaze ukuba ipalamente ihambe kwikhondo lokusebenzisa zonke iilwimi ngendlela eya kubonakalisa ukuzenza zilingane. Oku, okunene urhulumente uyakuxhasa kuba isikhokelo somthetho weelwimi zesizwe (National Language Policy Framework) siyicacisa gca into ebangele ukuba kuhanjwe ngekhondo leelwimi ngeelwimi. Kwintshayelelo umphathiswa ugqirha uBen Ngubane uthi, This step was essential in view of � the growing criticism from language stakeholders of the tendency towards unilingualism in South Africa (National Language Policy Framework Foreword �- Final Draft 13 November 2002). Oku kuyakhuthaza. I-Mag iyathemba ukuba intsebenziswano efana nale iza kuqhuba kuba sekuvakele ukuba ipalamente yesizwe ivumelene ngamxhelomnye ukuba isebenzise zonke iilwimi zoMzantsi Afrika.
Kutshanje iqumrhu losasazo i-SABC limeme izimvo kuluntu jikelele. I-MAG ingenise uxwebhu olubanzi ivelisa izimvo zayo ngokusetyenziswa kolwimi kumabonwakude waseMzantsi Afrika. Eyona nto ibe phambili kwezi zimvo ibe kukungabonelelwa kweelwimi ezazicinezelekile ngaphambili. I-MAG ayithandabuzi ukuba i-TV lijelo elingenza imihlola ekukhuliseni iilwimi ngako oko abalawuli bayakhondozwa ukuba basixhase kulo mbono. Siqinisekile izimvo ze-MAG ziza kusiwa iliso kwa-SABC.
La manyathelo ngamanyathelo akhangeleka emancinane kodwa ukuba ungacinga ngamazwi oosomajukujuku u-Apollo 11, One small step and a giant leap ungafakela nje amagama athi,for MAG. Zindwendwe ezihloniphekileyo, manene namanenekazi i-MAG izimisele ukuba yenze imitsi ebonakalayo kumbandela wolwimi.
Ziinjongo eziphambili ukuba i-MAG ibe ngumbutho owenzayo (action). Ibe ngumbutho owenza phambi kokuba konakale okanye kuqale omnye - ibe nguwo osuka kuqala. Iilwimi ziyakuvumela oko. Ngenxa yokutyeba kweelwimi zaseMzantsi Afrika maninzi amaphulo i-MAG eza kuwasungula. Ulwimi lokuthetha ngezandla ngumzekelo ocacileyo womhlaba ongekachukunyiswa. Iprojekthi yokufundisa olu lwimi inganegalelo elikhulu kunxibelelwano kwilizwe lethu.
Andithandabuzi ukuba uninzi lweendwendwe ezilapha zithi, Akwaba bendikwazi ukuthetha isiXhosa, isi-Afrikansi, isiNgesi, intetho yezandla. Namhlanje ndiqinisekile loo nyaniso siza kuyibona kwaye iza kusitshutshisa kuba
That goes to his heart.
Utsho uGqr uNelson Mandela njengoko ecatshulwe kwi-Cape Argus Julayi 17, 2003 iphepha 4 le-Icon.
Kubaxhasi (sponsors) bethu ndinqwenela ukunkqonkqoza kwangoku ndisithi ningothuki xa sisondela kuni sinimemela ekusebenzisaneni nathi kweli phulo lokusebenzisa iilwimi ezininzi.
Kumaziko namashishini amaninzi sicela inkxaso kweli phulo le-MAG. Siyazi ukuba uninzi lwamashishini namaziko amaninzi achaphazeleka kakhulu lulwimi. Ukuba amashishini namaziko ezempilo (ukwenza umzekelo) amaninzi angayithathela ingqalelo enkulu le nto, ezinye iziganeko ezehla kula maziko zingancipha.
Nangona i-MAG iqale apha eNtshona Koloni lo mbutho siyaqiniseka kwilizwe lonke loMzantsi Afrika uyalichaphazela. Senza isimemo kubo bonke abantu belizwe lethu bakubone kubalulekile ukuba bazimanye ne-MAG baxhase ukusetyenziswa kweelwimi zelizwe zonke zilingane. Ngaloo ndlela lo mlilo uza kuvutha ngakumbi!
Kumalungu e-MAG ndinqwenela ukwenza isicelo sokuba sisonke simanyane sisebenzisane sivane khonukuze lo mbono uhambele phambili. Kubo bonke abantu abangekabi ngamalungu eMAG kwakhona senza isimemo sokuba bazimanye nathi ekwakheni ngokutsha uMzantsi Afrika. Igalelo lomntu ngamnye liza kwenza inguqu. Ndiyabulela!